U gudub macluumaadka ku jira
SoomaaliValitse kieliVälj språkSelect languageВыбрать языкVali keelSélectionner la langueElegir idiomaDil seçin选择语言زبان را انتخاب کناختر اللغة
Marka uu ehelkaadu Finland ku dhinto
Caawimaadda xaaladaha dhibka ah
Usoo guurista Kauniainen
Shaqada iyo ganacsiga Kauniainen
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Kauniainen
Qoyska Kauniainen jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Kauniainen
Warar ku saabsan Kauniainen
Usoo guurista Tampere
Shaqada iyo ganacsiga Tampere
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Tampere
Qoyska Tampere jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Tampere
Warar ku saabsan Tampere
Usoo guurista Kokkola
Shaqada iyo ganacsiga Kokkola
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Kokkola
Qoyska Kokkola jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Kokkola
Warar ku saabsan Kokkola
Usoo guurista soonaha Raahe-Kalajoki
Degidda soonaha Raahe-Kalajoki
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee soonaha Raahe-Kalajoki
Deganaanshaha soonaha Raahe-Kalajoki
Waxbarashada soonaha Raahe-Kalajoki
Caafimaadka soonaha Raahe-Kalajoki
Qoyska soonaha Raahe-Kalajoki jooga
Waqtiyada firaaqada iyo soonaha Raahe-Kalajoki
Warar ku saabsan soonaha Raahe-Kalajoki
Usoo guurista Raahe
Shaqada iyo ganacsiga Raahe
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Raahe
Qoyska Raahe jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Raahe
Warar ku saabsan Raahe
Usoo guurista Siikajoki
Shaqada iyo ganacsiga Siikajoki
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Siikajoki
Qoyska Siikajoki jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Siikajoki
Warar ku saabsan Siikajoki
Usoo guurista Pyhäjoki
Shaqada iyo ganacsiga Pyhäjoki
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Pyhäjoki
Qoyska Pyhäjoki jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Pyhäjoki
Warar ku saabsan Pyhäjoki
Usoo guurista Kalajoki
Shaqada iyo ganacsiga Kalajoki
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Kalajoki
Qoyska Kalajoki jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Kalajoki
Warar ku saabsan Kalajoki
Usoo guurista Merijärvi
Shaqada iyo ganacsiga Merijärvi
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Merijärvi
Qoyska Merijärvi jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Merijärvi
Warar ku saabsan Merijärvi
Usoo guurista Iisalmi
Shaqada iyo ganacsiga Iisalmi
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Iisalmi
Qoyska Iisalmi jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Iisalmi
Warar ku saabsan Iisalmi
Usoo guurista Kajaani
Shaqada iyo ganacsiga Kajaani
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Kajaani
Qoyska Kajaani jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Kajaani
Warar ku saabsan Kajaani
Usoo guurista Oulu
Shaqada iyo ganacsiga Oulu
Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Oulu
Qoyska Oulu jooga
Waqtiyada firaaqada iyo Oulu
Warar ku saabsan Oulu
Waa la daabacay17.06.2022
Haddii aad fir ahaan ka soo jeedid Finniska ama xiriir qaraabonimo oo dhaw la leedahay Finnishka, ayadoo kuwaas laguu tixgelinayo waxaad Finland ka heli kartaa ogolaanshiyaha joogitaanka. Markaas waxaa tahay dib u soo guure (paluumuuttaja). Helitaanka ruqsada daganaanshada waxaa saamayn ku leh, sida ay yihiin xooga iyo dhawaanshada qaraabonimo ee aad Finland ku leedahay. Helitaanka ruqsada loogama baahna sababo kale, sida tusaale ahaan shaqo ama waxbarasho.
Faracyada muwaadiniinta u dhashay Finland
Muwaadiniinti hore ee Finland
Codsahada sharciga degenaanshaha
Summada aqoonsiga finnishka
Dadka aan waligood noqon muwaadiniin Finnish ah, laakiin waalidkood ama awoowayaashood ay yihiin ama ahaayeen dhalasho ahaan muwaadiniin Finnish ah, waxaa loo arkaa inay yihiin dad asal ahaan Finnish ah oo dib u soo guuraya (paluumuuttaja). Sidoo kale dadka markii hore dhalashada Finnishka haystay waxaa loo arkaa dib u soo guureyaal.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMaahanmuuttovirasto
Ogolaanshaha joogitaanka dib u soo guurahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waxaad heli kartaa daganaanshaha Finland, haddii ugu yaraan mid ka mid ah waalidiintaada ama awooweyaashaa/ayeeyooyinkaa ay yihiin ama ahaayeen asal ahaan muwaadiniin Finnish ah. Muwaadin u dhashay Finland waxaa loola jeeda qofka helay jinsiyadda Finland markii uu dhashay.
Markii aad codsanaysid sharciga waa inaad bixisaa macluumaad sax ah oo cadaynaya inaad farac ku leeday asal ahaan dalka Finnishka, sida tusaale ahaan shahaadada dhalashada rasmiga ah ee waalidiinta ama awooweyaashaa/ayeeyoyaashaa iyo cadayn sheegaysa inaad ehel tihiin. Lagaagama baahna cadaynta dhaqaalaha.
Haddii aad ahaan jirtay muwaadin Finnish ah, sababtaa darteed waxaad ku heli kartaa Daganaanshada Dalka Finland. Shardi ma aha in asalkaagii Finnish ahaa, laakiin waxaad dhalashada Finniska ku heli kartay codsi. Lagaagama baahna cadaynta dhaqaalaha.
Haddii aad ahaan jirtay muwaadin Finnish ah, waxaad dib u heli kartaa dhalashadaadii adigoo samaynaya ogeysiiska dhalashada (kansalaisuusilmoitus). Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Dhalashada Finland .
Waad ka soo codsan kartaa sharciga degenaanshaha safaarada Finland ee kuugu dhow intaadan imaan wadanka. Finland dhexdeeeda waxaad ka codsan kartaa barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista.
Waa inaad shaqsiyan u tagtaa goobta aad geysaneyso codsiga sharciga degenaanshaha. Horey u soo qaado wax walboo lifaaq ood ku dareyso codsigaaga asliyan, markii aad codsigaaga geyneyso safaarada ama barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista.
Markaad codsaneydo sharciga degenaanshaha waa inaad horey usoo qaadato aqoonsi baasaboor cadeynaya ruuxaad tahay. Markaad sharciga codsaneysana waxaa lagaa qaadaya astaanta faraha iyo biometerka lagu sameynayo kaarka sharciga.
Codsiga sharciga degenaanshaa waa lacag, lacagtana waa inaad dhiibtaa markaad dhiibeyso codsiga sharciga.
Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka.
Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene.
Ruqsada daganaanshada ee qofka ka farcamay dad asalkoodu finnish ahaaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ruqsada daganaanshada ee qofka horay u ahaan jiray FinnishLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSuomi-Seura
Jimciyadda danaha Finnishka dibadda ku nool Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Bogga InfoFinland waxaa soosaara magaalada Helsinki waxaana maalgeliya dowladda iyo degmooyinka xubnaha ka ah InfoFinland.
Khariidadda boggaWarar adeegga ku saabsanHelitaankaIlaalinta xogta